Homeबिबिधश्रीमतीको अ वैध सम्बन्धले डि प्रेशनको शिकार, जुन डाक्टरकहाँ गए उही श्रीमतीको प्रेमी !
श्रीमतीको अवैध सम्बन्धका कारण तनाब बढ्दै जाँदा डि प्रेसनको शि कार भएका एक व्यक्ति उपचारको लागि जुन डाक्टरकहाँ गए त्यही डाक्टरसँग नै श्रीमतीको अ वैध सम्बन्ध भएको खुलेको छ । अमेरिकाको ओरेगनका ती व्यक्तिले अहिले ती डाक्टरसँग २.९ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति माग्दै अदालतमा मुद्दा हालिदिएका छन् । द बेन्ड बुलेटिनका अनुसार पिर्सन टोन नामका ४७ वर्षका ती व्यक्तिले डा. रोनाल्ड रोसेनविरुद्ध ‘व्यवसायिक लापरवाही’को आरोप लगाउँदै मुद्दा हालिदिएका हुन् ।